मलाला युसुफजाईले गरिन् निकाह, विवाह चाँडै
नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मलाला युसुफजाईले मंगलबार आसिरसँग वैवाहिक सम्बन्ध गाँस्न लागेको घोषणा गरेकी छन्। बालिका शिक्षा र बाल अधिकारका क्षेत्रमा सक्रिय मलालाले आफ्नो ट्विटरमार्फत् बेलायतको बर्मिङ्घमस्थित घरमा आसिरसँग मुस्लिम परम्पराअनुसारुनिकाह गरेको घोषणा गरेकी हुन्। आफ्नो जिन्दगीको महत्वपूर्ण क्षण सार्वजनिक गर्दै …
एजेन्सी । तपाईले विवाह गर्ने पार्टनर कस्तो हुनुपर्छ भन्ने चाहानुहुन्छ ? वा तपाईले कल्पना गरेको जीवनसाथीमा के के गुणहरु खोज्नुहुन्छ ? यसको उत्तर तपाईले दिँदै गर्नुहोला । आज यहाँ महिला र पुरुषबीचको विवाहभन्दा पनि पुरुषले खाना पकाउने कुकरसँग विवाह गरेको छ । हो एकजना इन्डोनेशियाली पुरुषले भात पकाउने कुकरसँग …
महात्मा गान्धीः यसरी बनाइएको थियो हत्याको योजना
एजेन्सी । दिल्लीको कनोट प्लेसस्थित मरीना होटलको ठ्याक्कै अगाडि एउटा मस्जिदमा मगरिबको नमाज अर्थात् सन्ध्याकालीन प्रार्थना सुरु हुन लागेको छ। रमजानको महिना छ। केही समयपछि रोजा खोलिनेछ अर्थात् व्रत समापन गरिनेछ। मरीना होटलको एउटा कोठाबाट एक व्यक्तिले मस्जिदको चहलपहल हेरिरहेका छन्। ती व्यक्तिलाई यो कुरा थाहा छैन कि…
मेक्सिकोमा भेटिएको हजार वर्ष पुरानो डुङ्गा लगभग अक्षुण्ण अवस्थामा
एजेन्सी । पुरातत्त्वविद्हरूले दक्षिणी मेक्सिकोमा एउटै काठबाट बनेको माया सभ्यताकालीन डुङ्गा (क्यानो) फेला पारेका छन् जुन एक हजार वर्षभन्दा पुरानो भएको हुनसक्ने ठानिएको छ। पाँच फिटभन्दा लामो (१.६ मिटर) उक्त डुङ्गा लगभग नबिग्रिएको अक्षुण्ण अवस्थामा फेला पारिएको थियो। माया सभ्यताकालीन शहर चिचेन इत्सा नजिकैको एउटा स्वच्छ…
लुम्बिनी । युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज भैरहवामा एकै पटक ४ शिशुहरूको जन्म भएको छ । रुपन्देहीकी २४ वर्षीया सीता सार्कीले चम्ल्याहा शिशुको जन्म दिएकी हुन् । पाल्पाको माथागढी गाउँपालिका-१ चिदीपानीकी सिता कात्तिक ६ गते अस्पताल भर्ना भएकी थिइन् । उनले ९ गते अर्थात मंगलबार दिउँसो २ बजे ४ छोरीलाई जन्म दिएकी हुन् । …